June 25, 2013 22:27 / Leaveacomment
June 18, 2013 14:42 / Leaveacomment
May 21, 2013 03:43 / Leaveacomment
April 8, 2013 23:01 / Leaveacomment
April 1, 2013 22:31 / Leaveacomment
Zhulian Myanmar Show & Meeting @ Yangon (ခေတ္တ ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်)
March 29, 2013 10:39 / Leaveacomment
အထက်ပါခေါင်းစဉ်ကို လက်ရှိ အခြေအနေကြောင့် ခေတ္တရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်းသိရသည်။ စက်မှုဇုံမှ ကိုဇော်ဇော်က (၂၉-၀၃-၂၀၁၃) ဒီနေ့မနံက်ကျနော့်ဆီကို ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ “ဖွင့်ပွဲကိစ္စ ခဏရပ်ထားတယ်။ ( အကြောင်းရင်းကိုတော့ ထဲ့မရေးတော့ပါ … အများသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ) ဘယ်တော့ ဖွင့်ပဲလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အသိအကျမသိသေးပါ။ “ အချက်အလက်များကို သိသိခြင်း ဒီမှာ တင်ထားပါ့မယ်။
Zhulian Myanmar Show & Meeting @ Yangon
March 20, 2013 23:24 / 1 Comment on Zhulian Myanmar Show & Meeting @ Yangon
Zhulian Myanmar မှ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲနှင့် မိသားစုဝင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
Zhulian Myanmar မှ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲနှင့် မိသားစုဝင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလီယန် ကုမ္ပဏီ အေဂျင်စီအဖြစ် ပထမဦးဆုံးရရှိထားသော မြဝတီ အေဂျင်စီ၏ ဆိုင်ခွဲ ဖွင့်ပွဲအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဗဟို အချက်အခြာကျသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော ၇န်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြုလုပ်ရန် နေရာမှာ …. အမှတ် B3/4-ရတနာလမ်း၊ မလိခအိမ်ယာ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ရာဇာမင်း ကားဂိတ်အနီးတွင်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက်မှာ …. 30/31-03-2013 ( နှစ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်မှာ ….နံနက် 09:00 နာရီမှ 16:00 နာရီအထိဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် ဆက်သွယ်နိုင်မည့်သူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
– ကိုမင်းမွန်ကို ( မြဝတီ ) ဖုန်း ဝ၉၄၃ဝ၂၁၆၅၅
– ကိုစိုး ( ဘာအံ ) ဖုန်း ဝ၉၄ဝ၂၆၉၆၇၃ဝ၂
-ကိုမြတ်သူ (….. ) ဖုန်း ဝ၉၄၂၅၀၄၆၄၅
-မင်းကျော်ဇင် ( အိန္ဒု) ဖုန်း ဝ၉၄၂၅ဝ၃၆၆၆၅
-ကိုဇော်ဇော် ( စက်မှုဇုံ မလမ ) ဖုန်း ဝ၉၄၂၅၂၇၄၂၆၂
-ကိုခင်မောင်ဦး ( မော်လမြိုင် ) ဖုန်း ဝ၉၄၂၅၂၇၁ဝ၉၉
အထက်ပါ အေဂျင်စီ ဆိုင်ခွဲ ဖွင့်ပွဲ ၊ ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လိုသော ဇူလီယန်မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် မော်လမြိုင်မှ Express မှန်လုံကားဖြင့် အစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကားပေါ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စနစ်အတိုင်း Meeting ပွဲ နှင့် ခေါင်းဆောင်များမှ နည်းစနစ်များကို ပြောပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။စိတ်ဝင်စားသူများ မည်သူမဆို စာရင်းပေးသွင်း၍ Booking များပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
မော်လမြိုင်မှ ထွက်ခွာမည့် နေ့ရက်မှာ 29-03-2013 ညနေဖြစ်ပါသည်။
Booking အတွက် ဆက်သွယ်၇န်… ကိုဇော်ဇော် ( စက်မှုဇုံ – မလမ ) ဖုန်း ဝ၉၄၂၅၂၇၄၂၆၂ ၊ ဝ၉၈၇၂၅၅၃၆
ကိုခင်မောင်ဦး ( မော်လမြိုင် ) ဖုန်း ဝ၉၄၂၅၂၇၁ဝ၉၉